Ogaden News Agency (ONA) – Yaa ku xiga oo hawlgalkii Galaalshe uu galaafan doona?
Yaa ku xiga oo hawlgalkii Galaalshe uu galaafan doona?
Posted by ONA Admin	/ June 2, 2011
Waa su’aasha la’isla dhex marayo habeenadan magaalada Jigjiga ka dib markii shalay lala tagay madaxii ciidanka ku magacaaban asluubta iyo ku xigeenkiisii.
George Bernard Shaw oo ahaa nin xakiim ah oo laga dhaxlay xikmada badan ayaa waxaa laga hayaa inuu yidhi – Taariikhda oo isa soo celisa, ayaa waxaa dhaca marwalba waxyaaba aan la filaynin, hadaba aadanaha miyaanu ahayn kuwo aan waxba ka faa’idaysan dhacdooyinkii ay soo mareen. -. Waa dhab arintaa. Qofkasta oo gumaysi dabagala inuu ku halaagsamayo oo ugu dambaynta uu isaga cunayo waa taariikh qoran oo horey loo ogaa marwalbana dhacda. Sidaa oy tahay ayaad arki marwalba qaar inkaari ku dhacday oo maalmo uu ku shaqaysan gumaysiga oo dadkii la dhashay uu gacantooda ku layn.
Waxyaaba badan ayaa ka socda Jigjiga, ka dib markii la kala shakiyay oo la ogaaday in la’is dhex fadhiyo.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaadhay Jigjiga ayaa waxay sheegayaan in maalintii shalay ahayd si buuxda ay ula wareegeen maleeshiyada Hawaarin gacan ku haynta xabsiga ku caan noqday – Jeel Ogadeen -iyagoo halkaa ka kaxeystay ciidankii ku magacawnaa asluubta ee ku qornayd.
Ninka sida dhabta ah u xukuma hadda Jigjiga ee ina Laba-go’le oo tagay halkaas ayaa soo xidhay labadii masuul ee isaga hoosaysay qolyaha la yidhi waa ciidanka asluubta oo kala ahaa Axmad – madaxa ciidanka – (waa shaqsigii lagu badalay gacan ku-dhiigle ina Bade) iyo ku-xigeenkiisii. Labadoodanba waxa uu ku soo qaatay gaari qabaal ah iyagoo jeebaysan ilaa iyo hadana lama ogsoona meel uu geeyay.
Rasuulkeena CS wuxuu noo sheegay in qofka ku taageera dulmi nin wada inuu isaga Ilaahay ku saladayo ugu dambaynta. Waa dhab la arkay, lana arki doono.
Xaaladan hadda taagan ayaad moodaa inay la socoto arga-gixii ka soo wajahay jabkii ka soo gaadhay ciidamada gumaysiga weerarkii Galaalshe, waan marka la raadiyo cid dusha laga saaro wixii dhacay oo la’isku fardaamiyo, sidii Ibraahim xaad dusha looga saaray oo la’isaga fardaamiyay dhacdadii Cobolle inkastoo uu ahaa gacan ku dhiigle laayay dadkiisii suu u raaligaliyo gumaysiga.
Wararka kale ee laga helay maleeeshiyaankii Hawaarinta ee soo daabulahayay dhaawacii Galaalshe oo uu hogaaminhayay ninka loo yaqaano shaalaqe Tamaan ayaa markii la weydiiyay siday wax u dheceen wuxuu ka dayriyay xaalada meesha ka dhacday isagoo sheegay in ay dadka dhintay ku jiraan hal shaalaqe, iyo sedex shaanbal sidoo kale waxa uu sheegay inuu Harer geeyay 32 dhawr oo toban kamid ahi ay xaaladoodu liidato.
Waxyaabaha kalee dhacay ilaa shalay waxaa ka mid ahaa markii nin Axmaar ah oo dhigta jaamacada Jigjiga uu musqusha la galay kitaabka Quraanka kariim ka ah, isagoo ku xumaynaya muslimiinta guud ahaan gaar ahaan S.Ogadenya. Ninkan oo magaciisa aanan helin weli ayaa markii falkan foosha xun uu sameeyey oo laga maqlay magaalada ay shacabkii ku soo jabeen jaamacada si ay ninkaas u mariyaan abaalka uu mudan yahay, balse waxaa jaamacadii isku gadaamay ciidan uu wato ina Laba Go,le oo ugu hanjabay dadkii meesha dhoobnaa inay yihiin nabad-diid, oo qofkii far dhaqaajiya ama lagu arko aaga jaamacadana uu dili doono. Kolkaas ayay dadkii ka cabsadeen. Dhacdadan foosha xun ayaa waxay dhacday maalintii Talaadada ee 01-06-2011) saacada Jigjiga markay ahayd 13:00 duhurnimo.
Waxaa mudan in la xuso inay magaalada dhex joogaan qaar ka mid ah kooxdii Itixaadka ka xarootay oo masaajiddii ku haysta wadaadadii sii joogay dalka . Arimahan iyo dulmiga sii kordhay ee shacabka soo gaaray intay kooxdan xaroodeen ka dib, waxay ka mid tahay ciqaabta Ilaahay uu la doonay inay goobjooga ka ahaadaan iyagoo madaxa hoos u foorarinaya oo waliba qaarkood ay kuba biireen gacan ku-dhiiglayaasha.
way u dhamaatay ina iley iyo doofaarada weheliya.
guusha ilaahay baa le halgamayaasha.